Axmed Madoobe oo Shacabka Jubbaland ugu baaqay isku duubni.
Axmed Madoobe Oo Furaya Kalfadhiga 2-aad Ee Baarlamaanka…
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhamaan Shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha reer Jubbaland ugu hambalyeeyay munaasabada ciidul fidriga.
Shacabka waxa uu ujeediyay in ay badiyaan Ducada iyo alle bariga si looga gudbo Dhibaatooyinka dalka ka jira Cudurka Covid19, fatahaadda Wabiyada iyo daadadka Roobka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in meelo badan oo kamid ah Jubbaland oo hoostaga degmada Afmadow bisha laga arkay isla markana Wasaaradda diinta iyo Awqaafta Jubbaland ay xaqiijisay curashada Bisha Soonfur.
“Munaasabadan waxa ay kusoo aaday xili adag oo ay dadka Soomaaliyeed la daala dhacayaan dhibaatooyin uu ugu weyn yahay xanuunka Covid19 isla markaana waxa aan rajaynayaa in dadku ay raacan tilmaamaha Hay’adaha Caafimaadka” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Maamulka Jubbaland ayaa xalay Xilli hore ku dhawaaqay in Deegaanada maamulkaas laga arkay Bisha Soonfur (Shawaal), sidaas awgeed Wasaaradda Diinta Dowlad Gobolaadkaas ku dhawaaqday in ay Ciid tahay Maanta.